Wasaaradda Waxbarashada Ee Soomaaliya oo shaacisay waqtiga…
Abdiwahab Ahmed	 May 21, 2022
Muwaadin reer Jabuuti ah oo Somaliland loogu xidhay eedo uu…
Hay’adda Socdaalka Adduunka ee (IOM) ayaa sheegtay in Jimcihii ay rogmatay doon ay la socdeen tahriibayaal ka tagay Xeebaha Dalka Liibiya, waxaana la xaqiijiyay Geerida 3-ruux, halka raq iyo ruux lagu waayay 13-kale. IOM ayaa sheegtay in doontaan oo ka tagtay Xeebaha Liibiya ay afka gelisay Badda Mediterranean-ka, dadaal lagu raadinayo nolol ama geeri dadka dadkaan ayaa ka socda xeebaha dalkaan dhaca Waqooyiga Afrika. Kalluumeysato Liibiyaan ah ayaa oo wadatay Doon ayaa…
Madaxweynaha DG Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa labadii cishe ee lasoo dhaafay Magaalada Baydhabo u joogay wada-xaajood gaar ah oo uu la qaatay dhiggiisa Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen. Munaabad lagu soo sagootinayay oo xalay ka dhacday Magaalada Baydhabo waxa ay ku kala saxiixdeen heshiisyo labada maamul Goboleed ay wada gaareen, kadib wada-xaajodkii dhexmaray. DG Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ku heshiiyay…
Ciidamada ammaanka Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa howlgalo lagu baarayo Gaadiidka iyo dadka la socda waxa ay ka sameeyeen Xaafadaha Magaalada Jowhar oo xarun u ah maamulkaas. Dad u badan dhalinyaro oo ay hay’adaha ammaanka ku tuhmeen in ay katirsan yihiin Al-Shabaab iyo dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Magaalada Jowhar ayay kusoo qabteen baaristooda. Qaarkood waala sii daayay, halka shaqsiyaadka kale ay la aadeen saldhigyada ay ku leeyihiin Magaalada Jowhar oo xarun u…
Labada Gole ee BFS ayaa maanta oo Sabti ah waxa ay kulan wadajir ah ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, waxaana la horgeynayaa heshiiska dhexmaray Madaxweyne Farmaajo, Madaxda DG iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir. Xildhibaannada iyo Senatarada waxaa loo diray fariinta ajendaha kulanka maanta, waxaana la horgeynayaa heshiiska siyaasadeed oo qodobada ugu weyn ay tahay doorashada dalka, nuuca ay noqoneyso, ergada kursiga xildhibaanka dooraneyso iyo meelaha loo cayimay. Halkii kursi…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo khudbad ka jeediyay Meertada 75-aad ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa qayb kamid ah hadalkiisa waxa uu diiradda ku saaray Xaaladda Soomaaliya. Geelle ayaa dul istaagay heshiiska siyaasadeed ee doorashada Dalka 20/21 oo ay kala saxiixdeen Madaxweyne Farmaajo, Hoggaamiyaha DG hoostaga Dowladda iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir. Waa uu bogaadiyay, waxaana uu Qaramada Midoobay ka dalbaday Madaxweynaha Jabuuti…
Milatariga Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay badaleen gantaaladda ay u adeegsan jireen duqaymaha ay ka wadaan wadamada Soomaaliya Afghanistan, Pakistan, Ciraaq, Suuriya iyo Yemen si loo yareeyo dhibaatada soo gaaraysa dadka Shacabka ah. Waqooyiga galbeed Suuriya labo weerar oo ka dhacay waxaa loo adeegsaday gantaal aad u xoogan sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhiga Maraykanka. Howlgalkaas, ciidamada Mareykanka waxa ay isticmaaleen gantaal “Ninja Hellfire”, kaas oo…
Hey’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa warbixin ka soo saaray dib u eegistii Koowaad ee kaalmada gaarka ah ee Barnaamijka ECF loo soo gaabiyo. Hawlwadeeno ka socda Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF ayaa wadahadallo dhanka khadka internetka ah la yeeshay masuuliyiinta dowladda Federaalka Soomaaliya intii u dhaxeysay 12-22 bisha September, 2020. Kulanka dhanka khadka internetka ah ayaa ujeedkiisu ahaa dib u eegista koowaad ee barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya oo …
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Khudbad uu ka jeediyay Meertada 75-aad ee Golaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa ka hadlay Xaaladda Soomaaliya sida Doorashada, Cudurka Covid-19, Ammaanka, Siyaasadda, Midnimada, Wadajirka iyo qodobo kale. Ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay howlaha Amniga, Siyaasadda, kahortagga Covid-19 iyo caqabadaha dhaqaale ee uu sababay xannuunka Coronavirus sida uu khudbaddiisa ku dul istaagay Madaxweyne Farmaajo. Waxa uu sheegay in cudurka…
Guddoomiye Mursal & Madaxweyne Madoobe maxay kawada hadleen?
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo la kulmay Madaxweynaha DG Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa kawada hadlay arrimo dhowr ah. Waxyaabaha miiska lasoo dhigay waxaa kamid ah: Doorashada Dalka, codsiinta Heshiiska Madaxda DFS & Dowlad Goboleedyada, garab istaagga Maamulada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka. Mas’uuliyiin katirsan labada dhinac ayaa sheegay in si gaar ah kulanka Axmed Madoobe iyo Maxamed Mursal uu qayb ka ahaa…
Madaxda DFS & DG oo wadajir u hortagay labada Gole ee BFS.
Ilo xog ogaal ah ayaa Axadle u xaqiijiyay in Madaxda DFS iyo Dowlad Goboleedyada si wadajir ah ay u hortagaan labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya fadhigooda berri oo lagu horgeynayo Heshiiska Doorashada dalka. Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynayaasha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen iyo Hir-Shabeelle Maxamed Cabdiwaare,…
Previous 1 … 356 357 358 359 360 … 366 Next